20-ka Hablood Ee Aduunka Ugu Awooda Badan - Daryeel Magazine
20-ka Hablood Ee Aduunka Ugu Awooda Badan
Forbes ayaa ku dhawaaqay liiskoodii sannadlaha ahaa 100 dumarka ee ugu awooda badan dunida, oo ay ku jiraan madaxda ganacsiga, siyaasiyiinta iyo kuwa madadaalada.
Halkaan hoose ka eeg 20-ka ugu awooda badan dumarka caalamka:
1- Sawirkaan sare waa haweeneyda lagu magacaabo Meg Whitman, waxay madax ka tahay shirgada labaad ee caalamka ugu weyn ee dhanka teknoolajiyada, Hewlett-Packard. Whitman waxay leedahay lacag lagu qiyaasay 2 billion oo doolar.
2- Cristina Kirchner waa siyaasiyad caanka ah dalka Argentina, waxay xilka madaxweyne ee dalkaasi qabatay sanadkii 2007 iyadoo kala wareegtay seygeeda oo ahaa madaxweynaha wadankaasi, sanadkii 2011 ayay markale ku guulaysatay jagada madaxtinimada wadankaasi.
3- Marissa Mayer waxay madax ka tahay shirgada Yahoo. sanadkii hore liiska haweenka aduunka ugu awooda badan waxay ka gashay kaalinta #32, sanadkaan waxay gashay kaalinta 18.
4- Beyoncé Knowles waxay ku jirtaa hablaha dunida ugu caansan, waxayna xirfad u leedahay heesaha, jilida filimada, xayasiinta iyo ganacsiga.
5- Maria das Graças Silva Foster waa haweeneydii ugu horaysay ee maamusha mid ka mid ah shirgadaha ugu waa weyn gaaska iyo saliida. Waxay 30 sano soo maamulaysay shirgada Petrobras-Petróleo ee dalka Brasil. Haweeneyda lacagta soo gasha sanadkiii ayaa lagu qiyaasaa 100 malyuun oo doolar.
6- Irene Rosenfeld waa madaxa shirgada Mondel?z International Inc. Shirgadaan waxay ka howl gashaa in badan 80 dal oo caalamka ah.
7- Oprah Winfrey waxay ku heshay barnaamijkeedii ay daahin jirtay malaayiin doolar, sidoo kale waxaa shahaado sharaf gudoonsiiyay jaamacada Harvard.
8- Indra Nooyi waxay ku dhalatay oo wax ku baratay dalka India. Sanadkii 1994 waxay bilowday inay u shaqayso shirgada PepsiCo, hadana waxay ka tahay CEO, iyadoo mushaarkeedu 18.6 malyuun oo doolarka Mareykanka ah.
9- Susan Wojcicki waxay ka shaqeysay shirgada Google tan iyo sanadkii 1994-kii waxayna la shaqayn jirtay aasaasayaashii shirgadaasi ee Larry Page iyo Sergey Brin, hada waxay madax ka tahay qeybta Youtube.
10- sanadkii 2013, Park Geun-hye waxay noqotay haweeneydii ugu horaysay ee madaxweyne ka noqota wadanka South Korea.
11- Virginia Rometty waa haweeneydii ugu horaysay ee CEO ka noqota shirgada IBM.
12- Sheryl Sandberg waxay ka tirsantahay madaxda shirgada Facebook.
13- Xaaska madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, Michelle waxay ka baxday jaamacada Harvard, waxayna u ola-olaysaa xuquuqda caruurta.
14- Mary Barra waa haweeneydii ugu horaysay ee madax ka noqota shirgadaha caalimiga ah ee baabuubrta soo saara.
15- Hillary Rodham Clinton waa xoghoyihii hore ee dalka Mareykanka.
16- Christine Lagarde waxay u dhalatay dalka Faransiiska, waana haweeneydii ugu horaysay ee madax ka noqota Hay’adda Lacagaha Adduunka.
17- Dilma Rousseff waa madaxweynaha dalka Brazil.
18- Melinda Gates waa xaaska aasaasaha shirgada Microsoft.
19- Janet Yellen waxay ku takhasustay dhaqaalaha waxayna madax kasoo noqotay Bangiga dhexe ee dalka Mareykanka.
20- Angela Merkel waxay u dhalatay dalka Jarmalka waan xubin muhiim u ah Midowga Yurub ee
Google Oo Ka Tallaabsatatay Shirkadda Apple Noqotayna Shirkadda Aduunka Ugu Qiimaha Badan 7 Shirkadood Ee Aduunka Ugu Caansan Iyo Sida Ay Magacooda Ku Doorteen Awooda iyo Saameynta erayada lagu hadlo Aduunka Ka Dooro Saxiib Wanaagsan, W/Q: Samsam Ismaciil